सेलिब्रेटीलाई कस्तो लाग्यो ‘घामड शेरे’ ? « THULOPARDA.COM
सेलिब्रेटीलाई कस्तो लाग्यो ‘घामड शेरे’ ?
शुक्रबारबाट हेमराज विसी निर्देशित चलचित्र ‘घामड शेरे’ देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको छ । यसमा अभिनेता निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्का प्रमुख भूमिकामा छन् । उनीहरुले चलचित्रमा साली र भेनाको भूमिका निभाएका छन् । निश्चलको श्रीमतीको भूमिकामा सुष्मा निरौला छिन् । रिलिजको पूर्वसन्ध्या (बिहीबार) मा भक्तपूरको राधेराधेमा रहेको भाटभटेनीमा सञ्चालनमा आएको क्यूएफएक्स च्यानलको नयाँ शाखामा चलचित्रको प्रिमियर आयोजना गरिएको थियो ।
चलचित्रकर्मी र पत्रकारहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको प्रिमियरमा चलचित्र हेरेपछि अधिकांशले कथावस्तु, कलाकारको अभिनय र निर्देशक विसीको निर्देशकिय क्षमताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । अभिनेत्री आश्मा डीसीले आफूले अहिलेसम्म हेरेको चलचित्रमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट लागेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनका प्रेमी तथा अभिनेता संयम पुरीलाई पनि चलचित्र एकदमै मन परेछ ।
उनले भने, ‘म नेपथ्यमा बसेर यो चलचित्रको एक सदस्य हुन पाएको थिएँ । चलचित्र बनाउँदा जुन प्रकारको उत्सुकता र डर थियो त्यो आजबाट मेटिएको छ । चलचित्र एकदमै राम्रो बनेको छ । दर्शकलाई मनपर्छ ।’ उनले चलचित्रको कथावस्तु निकै राम्रो लागेको बताए । निर्देशक विसीको तारिफ गर्दै उनी भन्छन्, ‘हेमराज दाई कलरफूल लभस्टोरी चलचित्र बनाउन माहिर हुनुहुन्छ । यो चलचित्रमा सामाजिक विषयवस्तु उठाउनुभएको छ, जुन तारिफयोग्य छ ।’ पुरी, चलचित्र हेरेपछि अभिनेता निश्चलको त फ्यान नै भएछन् ।
हाँस्यकलाकार केदार घिमिरेले बाढीपीडित किसानको मर्ममाथि एउटा राम्रो चलचित्र बनेको बताए । उनी भन्छन्, ‘चलचित्र मर्मस्पर्शी र रमाइलो छ । अभिनय सबै कलाकारले राम्रो गर्नुभएको छ । चलचित्रले उठाएको विषयवस्तु तारिफयोग्य छ ।’ त्यस्तै, निर्देशक अशोक शर्माले चलचित्रमा खोट लगाउने ठाउँ आफूले नपाएको बताए । ‘निर्देशक विसीको काम असाध्धै राम्रो छ । निश्चल, सुष्मा र स्वस्तिमाले उस्तै राम्रो अभिनय गरेका छन् । चलचित्र नेचुरल र अर्गानिक छ । हेरुन्जेल मज्जा आउँछ’, उनले भने ।
अभिनेता गौरव पहारी पनि चलचित्र राम्रो बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो हाफमा मज्जाले हाँसियो । दोस्रो हाफमा भावुक भइयो ।’ निर्देशक विसीका अघिल्ला चलचित्रभन्दा ‘घामड शेरे’ फरक र राम्रो बनेको उनको भनाई छ । गायक तथा ‘साइँली’ चलचित्रका निर्माता हेमन्त रानाले पनि चलचित्र राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिए । ‘जात्रै जात्रा’ फेम्ड निर्देशक प्रदीप भट्टराई पनि चलचित्रको तारिफ गरेर थाकेनन् ।
‘निर्देशक हेमराज विसी लभस्टोरीको बादशाह मानिनुहुन्छ । ‘घामड शेरे’ मा कन्टेन्टमाथि काम गर्नुभएको छ । तर, उहाँको लभस्टोरीमा जुन छाप छ त्योभन्दा मलाई यो जनरामा अझ मज्जा लाग्यो । सामाजिक विषयवस्तुमा पनि उहाँले जसरी प्रेम बुन्नुभएको छ, त्यो तारिफयोग्य छ’, निर्देशक भट्टराईले भने । उनले बच्चाको सिनमा आफू धेरै ठाउँमा भावुक भएको पनि बताए ।
त्यस्तै, अभिनेत्री लुनिभा तुलाधरले चलचित्रमा मनोरञ्जन र विषयवस्तुमा सन्तुलन मिलाइएको बताइन् । ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को सफलताबाट दंग उनले भनिन्, ‘हेरुन्जेल चलचित्रले कतै पनि निराश बनाउँदैन । सामाजिक विषयवस्तु उठाइएको भएता पनि लभस्टोरीलाई निकै सुहाउँदो ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।’ निर्देशक विसी चलचित्रकर्मीबाट मिलेको प्रतिक्रियाले निकै खुसी देखिएका थिए ।